I-studio esihle esinendawo yokubhukuda ebhishi - I-Airbnb
I-studio esihle esinendawo yokubhukuda ebhishi
Antibes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, i-France
Ifulethi elilungiswe ngokuphelele endaweni enhle, ehlanzekile negcinwe kahle "i-Tamanaco Beach".
Itholakala esifundeni esihloniphekile se-Cap d 'Antibes eduze nebhishi elihle lesihlabathi lase-Salis, esitezi sesithathu (ikheshi elitholakalayo) eliya eningizimu/eningizimu-ntshonalanga.
Indawo yokubhukuda, i-WLAN ne-Smart TV iyatholakala.
Isitolo esikhulu sezitolo namabhikawozi, ikilabhu yasemanzini kanye nenkaba yedolobha elidala le-Antibes kuqhele ngebanga lokuhanjwa ngezinyawo.
Indawo enhle yokuphumula nokujabulela i-Antibes.
Isitudiyo savuselelwa ngokuphelele ezinyangeni zika-September kuya ku-November 2020. Ikhishi, ubhavu, umbhede & usofa wokuphumula, itafula lokudlela & izihlalo, i-Smart TV kanye nefenisha enkulu entsha sha.
Umbhede (u-140x200) unomatilasi ontofontofo kakhulu futhi awuthambi kakhulu ukuze uthole ingemuva elinempilo. Uvulandi (7mwagen) umema i-breakie, isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa ngaphandle ngokubuka i-Cap d 'Antibes nendawo yokubhukuda. I-grill kagesi iyatholakala ukuze isetshenziswe kuvulandi.
Isitolo esikhulu sezitolo & ibhikawozi (400M), ikilabhu yasemanzini (100m) kanye nenkaba yedolobha elidala le-Antibes (1,3km) ibanga lokuhanjwa ngezinyawo.
Ibhasi elihambayo elingu-N ° 14 elinokuma phambi kwendawo yokuhlala likuyisa ngqo enkabeni yedolobha futhi.
I-studio sithule kakhulu ngoba sibheke indawo eluhlaza ye-Cap d 'Antibes hhayi emgwaqweni ngaphambi kwendawo yokuhlala. I- ibheke eningizimu/eningizimu-ntshonalanga ngakho ngisho nasebusika ifudumele futhi ithokomele.
Isakhiwo sinendawo yokubhukuda enhle enokufinyelela kubahlali (ivuliwe kuphela ngenkathi yonyaka). Ngaphezu kwalokho i-WLAN inikezwa kanye ne-Smart TV entsha.
Ukuqasha isikhathi esifushane nesiphakathi kuyatholakala ngezaphulelo zokuhlala isikhathi eside.
Intela yezokuvakasha nenani lokuhlanza kuzofakwa.
Sicela uqaphele, lena yi-studio sokungabhemi!
Izilwane ezifuywayo azivunyelwe ngokuqondile ngaphandle uma umnikazi zivunyelwe ngokuqondile.
Okwabafundi abasheshayo... :)
ISTUDIYO - ISTUDIYO
esingu-34M studio esisesitezi sesithathu ngokuqondile ebhishi (La Salis)
- ilungiswe ngokuphelele ngo-September kuya ku-November 2020
- umbhede olala abantu ababili (u-140x200) onomatilasi ontofontofo kakhulu
- usofa wokuphumula ongandiswa ukuze usebenze njengombhede womuntu oyedwa
- itafula lokudlela, i-smart TV engu-32-inch, ukufinyelela
kwe-WLAN - ikhishi elisha (ngo-Sept 2020) elinehhavini, i-microwave, ifriji elinomshini okhipha amanzi nefriji, isitofu se-ceramiv, umshini wokugeza izitsha nomshini wokuwasha
- ubhavu omusha (Okt 2020) one-shower, i-WC, isibuko esikhanyayo nesifudumezi samathawula
- i-balcony enesikhala (7mwagen) enetafula nezihlalo ze-breakie yangaphandle, isidlo sasemini noma ukudla
- itholakala ngokuqondile e-Plage de la
Salis - iya eningizimu/eningizimu-ntshonalanga, ngakho-ke ifudumele futhi ithokomele ngisho nasebusika
- izolile kakhulu ngoba ayibhekene nomgwaqo kodwa ubuhle obuluhlaza be-Cap d 'Antibes nendawo yokubhukuda
- isitolo esikhulu kanye nendawo yokubhaka ebangeni lokuhanjwa ngezinyawo (400M)
- ikilabhu yasemanzini ngaphakathi kwebanga elingu-100M lokuhamba ngezinyawo (ukuqasha i-ob standup paddles, izikebhe zokuhamba ngomkhumbi, njll.)
- ibanga lemizuzu engu-15 kuya kwengu-20 ukuya enkabeni yedolobha le-Antibes (1,3km)
- Ibhasi elihambayo (N° 14) phambi kwendawo yokuhlala enkabeni yedolobha le-Antibes
- indawo yokubhukuda ehlanzekile nevulekile yezakhamuzi zendlu (ivuliwe kuphela phakathi nenkathi yonyaka)
- ikheshi -
Ukufinyelela kwe-Smart TV
ne-WLAN - ikhishi elinakho konke elinomshini we-Nespresso, umshini wokuwasha &
umshini wokuwasha izitsha - i-grill kagesi ukuze isetshenziswe kuvulandi
- igumbi lokugcina amapotimende njll.
- igumbi lihlanzisiswa kahle ngemva kokuhlala komhlali ngamunye
- amalineni ombhede ayatholakala
- 'iphakethe lokuqalisa' elinikeziwe (lilinganiselwe: amakhekhe ekhofi, itiye, amakhekhe omshini wokuwasha izitsha, amakhekhe emishini yokuwasha)
- sicela uqonde, ukuthi ngefulethi elilungiswe ngokuphelele singathanda ukugcina lihlanzekile futhi 'lingadonswanga'.
- sinenja nathi, nokho izilwane ezifuywayo zivinjelwe.
- sinelungelo lokunikeza izibonelelo kuye ngobuntu bezinja nesilinganiso sokulahlekelwa yizinwele ;)
Inombolo yepholisi: 06 004 20 180 0 CM